Erdogan oo digniin cabsi leh u diray Greece – “Waad ka shalaay doontaan ficilladan” | Arrimaha Bulshada
Home English News News Erdogan oo digniin cabsi leh u diray Greece – “Waad ka shalaay doontaan ficilladan”
Erdogan oo digniin cabsi leh u diray Greece – “Waad ka shalaay doontaan ficilladan”
Bulsha:- Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistii ugu digay Greece inay militariga ka caagaan Jasiiradaha ku yaalla badda Aegean-ka, isaga oo sheegay “inaysan kaftan ka aheyn” hadalka noocaas ah.
Turkey ayaa sheegtay in Greece ay militari ka buuxineyso Aegean-ka, taasi oo ka hor-imaneysa heshiisyada damaanad qaadayaa in jasiiradahan ay noqdaan kuwa aan hubeysneyn.
Ankara ayaa ku doodda in jasiiradahan loo daayey Greece ayada oo shuruud looga dhigay inay ahaadaan kuwo ka caagan militariga.
Greece ayaa iyana ku doodad in Turkey ay si ula kac khalad ugu tarjunto heshiisyada la xiriira ciidamada hubeysan ee jasiiradaheeda bari, waxayna sheegtay inay xuquuq sharci ah u leedahay inay is-difaacdo kadib tallaabooyin cadaawadeed oo ay qaaday Ankara, oo ay ka mid tahay inay dagaal ku hanjabtay.
Digniinta Erdogan ayaa imaneysa ayada oo ay kasii dareyso xiisadda u dhaxeysa labadan dal ee ka tirsan isbaheysiga NATO ah, oo ay u dhaxeeyaan murano dhowr ah oo ka mid yihiin; sahminta kheyraadka macdanta ee badda Meditareeniyaanka iyo isku haysashada Badda Aegean-ka.
“Waxaan fursad u siineynaa Greece inay joojiso hubeynta jasiiradaha aan laheyn maqaamka militari, ayna u dhaqanto si waafaqsan heshiisyada caalamiga ah,” ayuu yiri Erdogan oo ka hadlay maalinkii ugu dambeeyey dhoola-tus militari oo ka dhacay meel u dhow Izmir oo ku taalla xeebta Turkey ee Aegean-ka.
“Ma kaftamayo, waxaan u hadlayaa si dhab ah. Dalkan go’aan ayuu gaaray.”
“Waxaan ugu digeynaa Greece inay ka fogaato riyooyinka iyo ficillada ay ka shalayn doonto, ayna caqli kaashato,” ayuu yiri madaxweyne Erdogan.
“Turkey kama tagi doonto xuquuqdeeda Aegean-ka, si la mid ah si aysan uga tegi doonin inay adeegsato xuquuqda ay ku leedahay heshiisyada caalamiga ah.”